OTU ESI EMEPỤTA EMAIL NA GMAIL.COM - GMAIL - 2019
Ọbụna na kọmputa multi-isi na Windows 7, mgbe ịgbanyere usoro ahụ, ọ bụ naanị otu isi na-eji ndabara. Nke a budata ibelata ngwa ngwa PC. Ka anyị chọpụta otú e si agụnye ihe ndị a niile iji mechie ọrụ ahụ.
Ntughari nke cores nile
N'ụzọ dị mwute, na Windows 7, ọ bụ naanị otu ụzọ iji rụọ ọrụ ndụ. A na-egbu ya site na shea. "Nhazi usoro". Anyị ga-ele ya anya n'ụzọ zuru ezu n'okpuru ebe a.
Nke mbụ, anyị ga-arụ ọrụ ahụ. "Nhazi usoro".
Anyị pịa "Malite". Banye "Ogwe njikwa".
Gaa na ndekọ ahụ "System na Nchebe".
Anyị pịa "Nchịkwa".
N'ime ndepụta nke windo egosipụtara, họrọ "Nhazi usoro".
E nwekwara ụzọ dị mfe iji mepụta ngwá ọrụ a kapịrị ọnụ. Ma ọ bụ obere ihe omimi, ebe ọ na-achọ icheta otu iwu. Ide Nweta + R ma na-abanye n'èzí:
Iyi nke ihe di mkpa maka nzube anyi ga emepe. Gaa na ngalaba "Download".
Na ebe mepere emepe pịa na mmewere "Nhọrọ Di elu ...".
A ga-emeghe windo nhọrọ ndị ọzọ. Nke a bụ ebe ntọala na-amasị anyị na-eme.
Lelee igbe dị n'akụkụ oke. "Ọnụ ọgụgụ nke ndị nhazi".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ndepụta dị n'okpuru na-arụ ọrụ. Ọ ga-ahọrọ nhọrọ na ọnụ ọgụgụ kachasị elu. Ọ na-egosipụta ọnụ ọgụgụ cores na PC a, ya bụ, ọ bụrụ na ịhọrọ nọmba kachasị elu, mgbe ahụ, a ga-etinye ngalaba niile. Wee pịa "OK".
Ịlaghachi na windo ahụ, pịa "Tinye" ma "OK".
Igbe ga-eme ka ị malitegharịa PC ahụ. Nke bụ eziokwu bụ na mgbanwe ndị e mere na shea "Nhazi usoro", bara uru naanị mgbe ịmalitegharịrị os. Ya mere, chekwaa akwukwọ niile a na-emeghe na mmemme na-arụsi ọrụ ike iji gbochie ọnwụ data. Wee pịa Rụgharịa.
Kọmputa ga-amalitegharịa, mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-agbanye igbe ya nile.
Dị ka a ga-ahụ site na ntuziaka ndị dị n'elu, ọ dị nnọọ mfe iji rụọ ọrụ niile na PC. Ma na Windows 7, a ga-eme nke a n'otu ụzọ - site na windo "Configurations System".
https://termotools.com ig.termotools.com © Gmail 2019